ရုပ်ရှင်လောကကနေ လိင်အကြမ်ဖက်မှုပပျောက်စေ။ ဂျပန်ရုပ်ရှင်လောကကိုကာကွယ်ဖို့ လှုပ်ရှားလူတစ်စု ထွက်ပေါ်လာ။ - JAPO Japanese News
ရုပ်ရှင်လောကကနေ လိင်အကြမ်ဖက်မှုပပျောက်စေ။ ဂျပန်ရုပ်ရှင်လောကကိုကာကွယ်ဖို့ လှုပ်ရှားလူတစ်စု ထွက်ပေါ်လာ။
သော 15 Apr 2022, 12:40 ညနေ
“ ရုပ်ရှင်ခေါ်ရိုက်ပေးမယ်” ဒီလိုစကားအစချီပြီး အဲ့ဒီအစား သူနဲ့အိပ်ပေးရမယ်။ တစ်နည်းအားဖြင့် လိင်ဆက်ဆံဖို့တောင်းဆိုလာတဲ့ ပါဝါရှိသူတစ်စုရှိပါတယ်။ ဒါဟာ ဖျော်ဖြေရေးလောကမှာတော့ ဖြစ်လေ့ရှိတယ်ဆိုတာကို သာမန်လူဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်လည်းကြားမိပါတယ်။
ကြားရုံပဲကြားမိတာပါ။ တကယ်ဟုတ်မဟုတ်တော့ မသေချာခဲ့ပါဘူး။
ဒီရုပ်ရှင်တွေကိုဖန်တီးရိုက်ကူးတဲ့ဒါရိုက်တာတွေဟာ အထူးသဖြင့် အင်အားပါဝါ ကြီးကြပါတယ်။
ဒီအပြင် ဒီလိုဒါရိုက်တာတွေရိုက်ကူးတဲ့ရုပ်ရှင်ထဲမှာ ပါဝင်ချင်တဲ့မိန်းကလေးတွေမှ တစ်ပုံကြီးပဲဆိုတာကို အထူးတလည်ပြောနေစရာတောင်မလိုပါဘူး။
“ ငါနဲ့အတူအိပ်ပေးရင် မင်းသမီးတင်ပေးမယ်”
ဒါဟာ ထုံးစံတစ်ခုပါပဲလို့သဘောတူညီပြီး မင်းသမီးဖြစ်လာတဲ့လူတွေ ရှိပါတယ်။
အမေရိကန်မှာလည်း ဒီလိုကိစ္စတွေသတင်းထဲမှာ မကြာခဏပါလာတဲ့အတွက် ဂျပန်အတွက်အထူးအဆန်းမဟုတ်ပေမဲ့၊ အမှန်တကယ်ရုပ်ရှင်လောကမှာ ကြိုးစားနေတဲ့လူတွေအထဲက ဒီလိုဖြတ်လမ်းနည်းလိုက်သူတွေရှိနေခြင်းက အားလုံးအတွက်ထိခိုက်နစ်နာစေပါတယ်။
ဒီတစ်ခေါက်ကိစ္စမှာ ဒေါသထွက်ကြတဲ့ နာမည်ကြီးရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာတွေဟာ ပူးတွဲအမည်နဲ့ “ ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာဆိုတဲ့နေရာကို ချနင်းတဲ့အကြမ်းဖက်မှုအားလုံးကို ကန့်ကွပ်ဆန့်ကျင်တယ်” ဆိုပြီးထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။
ဂျပန်ရုပ်ရှင်လောက၊ ဖျော်ဖြေရေးလောကမှာ ဒီတစ်ခေါက်ပြဿနာဟာ အတော်လေးဟိုးလေးတကြော်ဖြစ်သွားပါတယ်။
စကားမစပ် ဂျပန်ရုပ်ရှင်လောကဟာ ဖြူစင်တဲ့ပုံရိပ်ကို ပြန်ယူဆောင်လာနိုင်ပါ့မလား?
ယောက်ျားလေးဘက်က မင်းသားဖြစ်ဖို့ ဒီလိုကိစ္စတွေမလုပ်ဘူးဆိုတာသေချာပေမဲ့၊ မိန်းကလေးဘက် စပြီးမြူဆွယ်လာတာမျိုးလည်းရှိတတ်ပါတယ်။
ဂျပန်စကားမှာဆို 枕営業（まくらえいぎょう）Pillow business လို့ခေါ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ကိုအသုံးချပြီး အလုပ်ရှာတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့…
ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် အောင်မြင်တဲ့အနုပညာရှင်ဖြစ်ချင်တယ်။ ဒီလိုစိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့လုပ်လိုက်ကြသလို၊ အတင်းအကြပ် rape လုပ်တာမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက် မငြင်းနိုင်ပေမဲ့၊ ဒီလိုလူတွေ ရှိနေသရွေ့၊ ဒါဟာထုံးစံပဲ(မိမိနဲ့အိပ်ပေးရမယ်)လို့တွေးမယ့်အမျိုးသားတွေ ရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်။
စာချုပ်ချုပ်ချင်တဲ့ အာမခံလုပ်ငန်းတို့၊ ပြင်းထန်တဲ့ယှဥ်ပြိုင်မှုအတွင်းမှာရှိနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလည်း မေးခွန်းထုတ်ရမယ့်ပြဿနာဖြစ်တယ်။
ယောက်ျားလေးတွေတော့ ကိုယ်ခန္ဓာအရင်းအနှီးမလုပ်ဖို့သေချာတဲ့အတွက် မပြောလိုပေမဲ့၊ အမျိုးကောင်းသမီးတွေအတွက်တော့ မိမိကိုယ်ခန္ဓာကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ ထပ်လောင်းမှာကြားချင်ပါတယ်။
ယောကျ်ားနဲ့ ဖောက်ပြန်တဲ့မိန်းမကို နာအောင် ရိုက်ပစ်! ဂျပန်သမိုင်းမှာ ရှိခဲ့တဲ့ ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခု!
ကမ္ဘာမှာနာမည်ကျော်ခဲ့တဲ့ ဂျပန်ရုပ်ရှင် Seven Samurai ။ ပုံမှန်ရုပ်ရှင်တစ်ကားထက် ထုတ်လုပ်မှု ၇ ဆကုန်ကျခဲ့သည်။
တစ်ခုတည်းသော အဏုမြူဗုံးကြဲခံရတဲ့နိုင်ငံဟာ နျူကလီးယားလက်နက် ပိုင်ဆိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းပြီလား?
ဂျပန်လူမျိုးတွေ ဘာကြောင့် သွေးအေးရသလဲ?
Do not stop the camera! ဆိုတဲ့ Zombie ကားကို Covid ကာလအတွင်းပြန်ရိုက်ကူးနေပြီ !!!
မကြာခင် ဖူဂျီတောင်ပေါက်ကွဲတော့မှာလား။ ဒါဆိုရင် ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုတွေ ဖြစ်လာမလဲ?
ပါရမီရှင်အထက်တန်းကျောင်းသားလေး လက်နဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့ PC
(အင်ဂျင်နီယာဘော်ဒီဆိုဒ်) မြို့ပြအင်ဂျင်နီယာအလုပ်မှာစန်းသစ်တဲ့အရာတွေဖန်တီးနိုင်ပါသလား ?
ဝက်ဝံကိုသတ်ပစ်လိုက်လို့ သေနတ်ကိုင်ဆောင်ခွင့် ရုတ်သိမ်းခံခဲ့ရတဲ့ရဲ
ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့ ခရစ်စမတ်က ဘယ်လိုလဲ ? ?